Fanamiana amin'ny sekoly ambaratonga
Ankehitriny dia misy dikan-teny maro samihafa amin'ny fanamiana ny sekoly. Ireo mpaka sary amin'ny endriny dia manandrana manadinadina karazan-damosina maromaro mba hahatonga ny akanjo mahandro sy mahafinaritra. Ny fitaovana tsara dia ampiasaina amin'ny fametahana. Ireo modely ireo dia samy hafa amin'ny karazana sy loko samihafa. Ny safidy malaza ho an'ny tovovavy dia fanamiana ara-pianarana, anisan'izany ny akanjo sy akanjo. Ity fitaovana ity dia tena ilaina indrindra amin'ny antso farany. Amin'izao fotoana izao, afaka mividy antokon'olona toy izany ianao, ary manjaitra ny baiko. Satria mahaliana ny mahatakatra io olana io amin'ny antsipirihany sy ny fandinihana ireo modely azo atao.
Fomba hisafidianana fanamiana ara-pianarana?
Rehefa misafidy fiakanjo iray ho an'ny mpianatra iray dia tokony hahatsiaro ny fotoana toy izao:
Ilaina ny mandray an-tanana ny fomban-drazana sy ny zavatra takian'ny rafi-pampianarana;
Ny anjara asany manan-danja dia asehon'ny fisehoana, ny endrik'ity tovovavy ity, ary koa ny lanjany;
Ny tombontsoa ara-bola eo amin'ny fianakaviana koa dia zava-dehibe.
Ny endriky ny loko misy ny akanjo vita printy dia be dia be. Maro no maniry ny loko mainty amin'ny akanjo, azonao atao koa ny mifidy volom-borona. Ny endriny dia maneho tsara amin'ny feo manga, ny sasany toa ny loko maitso. Raha te-hitsangana ny tovovavy dia asehoy ny maha-izy azy, tokony hifantoka amin'ny loko maitso ianao. Na dia tsy hita matetika aza ny fiakanjonan'ny sekoly toy izany, satria ny mpianatra dia hanana fahafahana hijery ny niandohana.
Ny fametrahana ny fanamafisana ny sekoly, mila mahatsiaro ianao fa ny lambondriaka dia tsy mifanentana tsara amin'ny sarafana, noho izany dia tsara kokoa ny mifidy fomba akanjo hafa. Zava-dehibe ihany koa ny manamarina fa ny lava tsara indrindra ho an'ny akanjon'ny mpianatra dia hodinihina rehefa 10-15 sm eo ambonin'ny lohalika ny jiron'ny skirt. Ny tendron-tsoron'ilay bobongolo dia mety ho samy hafa be, ohatra, mba hananana kavina, sombintsombiny kely na hodi-potsy. Ny antsipiriany toy izany dia hanampy ny maha-izy azy.
Tokony hitadidy ireo zazavavy zazavavy fa afaka miova ny endrik'ilay endrika amin'ny fampiasana karazana angady sy vovobony. Ireo singa ireo dia azo atao amin'ny dantelina na kakazo - amin'izao fotoana izao dia tena malaza ny antsipiriany.
Ny halavan'ny amboaram-bolo dia tokony hofidina amin'ny alàlan'ny safidy sy ny fotoana amin'ny taona izay hanaovan'ilay tovovavy ilay akanjo.
Karazam-panamafisam-peo miaraka amin'ny takona
Ny endriky ny akanjo
Ny mpanamboatra dia manamboatra modely samihafa, izay ahafahanao manaiky ny endriky ny tarehimarika sy ny safidin'ny ankizivavy mpianatra rehefa misafidy.
Dresses A-endrika silhoueta dia tery ao amin'ny tratra, fa manitatra ny farany. Ny Style dia manafina tanteraka ny tsy fahampian'ny sary ary mahasoa ny ankamaroan'ny zazavavy, satria malaza izy io.
Ny fanamiana amin'ny sekolim-pirafitrana, izay misy akanjo lava mitambolimbolina, dia tsara fijery amin'ny zazavavy kely. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy ambany ny ambany indrindra amin'ny akanjo, fa ny tovovavy dia nahafinaritra ny nandeha.
Models of aprons
Ny safidy amin'io antsipiriany io dia tsy zava-dehibe noho ny akanjo. Talohan'io ny proteine ​​dia miaro ny endriny tsy ho voaloto, fa amin'izao fotoana izao dia manatanteraka fomban-draharaha manokana izy. Izy io dia ahitana ny faritra ambany sy ambony, bingo, ary koa fehikibo izay mety mifatotra amin'ny lamosin'ny endrika tsipìka. Ny karazana fingotra dia mety ho hafa koa.
Models amin'ny fehin-drivotra miditra amin'ny akanjo rehetra. Raha nosokafana tamin'ny sisiny ny sisiny, dia tena mahafinaritra ilay akanjo.
Ny modely misy rihana ambany dia safidy iray hafa tokony hodinihina. Ity fomba fijery ity dia mahafinaritra sy tsy mahazatra.
Ho an'ny famolavolana akanjo, ny vatosoa voajanahary amin'ny vidy kely (tsy mihoatra ny 30%) amin'ny polyester na elastan dia ampiasaina. Ny fanampiana toy izany dia mamela anao hitazona ny endrik'ilay akanjo lava, manatsara ny fikarakarana azy.
Ny safidy ny fitaovana ho an'ny lambam-baravarana dia tsy zava-dehibe noho ny akanjo. Ny indostrian'ny maoderina dia manolotra safidy maro ho an'ity singa ao amin'ny garderobe ity. Ny fofona avy amin'ny satin, ny guipure dia mijery tsara sy mifanentana tsara amin'ny fisehoan-javatra manetriketrika.
Ny lamba vita amin'ny "opaque" dia manamboatra ny fitaovana maoderina kokoa, henjana, fa tsy mampihomehy.
Ireo mpankafy tsy mahazatra rehetra dia afaka mifantoka amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy amin'ny fanamiana ny sekoly. Ny vokatra toy izany dia mety ho tsy manam-paharoa, raha toa ka ataon'ny tompony ny baiko.
Anisan'ireo karazana modely amin'ny fanamiana ny sekoly, ny ankizivavy tsirairay dia afaka mahita ny safidiny izay hifanaraka aminy.
Sarimihetsika amerikanina momba ny sekoly sy ny tanora
Ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy iray hanoratra tsara raha tsy manao fahadisoana?
Aiza ny mandefa ankizy mandritra ny fahavaratra mba hitsaharana maimaim-poana?
Sarimihetsika momba ny fitondrana vohoka
Hajao ny zatovo
Mystery of Halloween miaraka amin'ny valiny
Ny biography of Aishwarya Rai
Palm oil - loza
Alyssum - fambolena sy fiahiana
Legana misy holatra
Ny endrika boribory amin'ny endrika lava
Ahoana ny fomba hanaovana ny trano fonenana ao amin'ny firenena?
Ny fanafody amin'ny alika rehetra
Nianjera ny tongotra-inona no tokony hatao?
Shakshuka - resipe
Wenge varavarana ao anatiny
Amin'ny inona no manao akanjo manga mainty?
Fitaovam-piofanana lamba - akanjo mafana vita amin'ny volon'ondry rameva na merino
Ny tabloids dia maminavina ny fizarazarana an'i Jennifer Aniston sy Justin Teru
Salady misy champignons holatra
Ao amin'ny zoron'ny maso - ahoana no ahafahana miala?